Waa kee ciyaaryahanka Real Madrid ka tirsan ee Laaluushka ku bixiyay si uu u helo Leysinka Baabuurka? - Gool FM	twitter
Waa kee ciyaaryahanka Real Madrid ka tirsan ee Laaluushka ku bixiyay si uu u helo Leysinka Baabuurka?
(Madrid), 19 Maarso 2017 –Waxaa soo if baxday in Daafaca Bidix ee kooxda Real Madrid ee haatan amaahda ugu ciyaara kooxda Monaco ee Faransiiska, Fabio Coentrao uu Lacag laaluush ah ku bixiyay si uu u helo Leysinka Baabuurka ee uu haatan isticmaalo.
Sida ay faafiyeen warbaahinta Spanish-ka kuwaas oo ka soo xigtay Wargeyska maalinlaha ah ee ka soo baxa Bortuqiiska ee ‘OJogo’ waxaa Coentrao uu sanadkii 2012 markaas uu ku soo biiray Real Madrid uu Leysinka baabuur wadidda ka qaatay Magaallada Villa Verde, Braga ee Bortuqiiska iyadoo la xaqiijiyay in uu 4,000 Euro ku bixiyay sidii loogu fududeyn lahaa su’aalaha iyo jawaabaha imtixaanka baabuur wadidda (theoretical part of the driving licence).
“Caawinaad la’aan kuma baaseen imtixaankaas” ayuu Coentrao u sheegay ‘Ojogo.
Mid ka mid ah Labadii qofood ee imtixaanka ka qaadeysay Coentrao ayaa la sheegay inuu farta uga tilmaamayay ciyaaryahanka su’aalaha qaladka iyo saxda ah si uu ugu guuleysto imtixaankaasi.
Haatan Coentrao ayaa arrintaas darteed waxaa lagu ganaaxay inuu bixiyo 3,000 Euro oo uu siinayo Bankiga Cuntada magaalladii uu Leysinka baabuurka ka qaatay ee Braga si lacagtaasi loogu quudiyo dadka baahan.